In ka badan 30 sano, aasaasayaasha Minnesota ee aasaasiga ah (MIFs) waxay wada shaqeynayeen sidii loo horumarin lahaa xasilooni dheeraad ah oo weyn oo Minnesota ah iyada oo lagu maalgelinayo habdhaqanka iyo hal-abuurka dadka ku nool gobolladooda.
Iyada oo la aamisan yahay in bulshooyinka xooggani ay ka soo koraan dhulka, McKnight waxay awood u siisay lixda hay'adood ee walaashaa inay sameeyaan mudnaanta u gaarka ah ee horumarinta dhaqaalaha. Hannaanka ganacsiga ee dabacsan ee ay raacaan waxay u oggolaanayaan deeq dhaqameedyada iyo deynta jaaliyada cusub.
MIFs waxay u muuqatay tusaale qaran oo lagu dabakhayo awoodda aasaasiga ah ee aasaasiga ah ee degaannada miyiga ah ee taariikhi ah. Tan iyo markii la aasaasay, waxay maalgashi ku sameeyeen in ka badan $ 264 milyan ganacsiga maxaliga ah waxayna gacan ka geysteen in la abuuro 47,000 oo shaqooyin tayo leh. Waxay bixiyeen ku dhowaad 32,000 deeqo ku baahsan gobolka Greater Minnesota, iyagoo ku dhowaad $ 216 milyan oo loogu talagalay wax kasta oo ka yimid waxbarashada hore ee ilmanimada si loo dhiso awooda hay'adaha aan dawliga ahayn iyo iskuduwidda gargaarka musiibooyinka ee magaalooyinka yaryar.
Marka mashiinka maamulaha, McKnight wuxuu hadda bixiyaa taageero ka yar shan-meelood meel ka mid ah kharashyada hawlgalka sanadka-caddaynaya in bulshooyinka Greater Minnesota ay leeyihiin xirfad iyo awood ay ku joogaan shaqadan muhiimka ah.
Wax badan ka baro GreaterMinnesota.net.